tolis.co ज्योतिष भविष्यवाणी May 2022 को लागी सबै राशि चिह्न
ज्योतिष May 2022
Live Support सहायता सम्पर्क
ज्योतिष ज्योतिषी विश्लेषण गर्दछ @ भविष्य लेख
रमाईलो भेला र भेटहरूको दिन! सार्वजनिक सम्बन्ध र मनोरन्जनात्मक यात्रा मनपर्दछ।
प्रेम: तपाईलाई मन पराउनेलाई तपाईको प्रेम व्यक्त गर्न तपाईलाई राम्रो दिन हो। तपाईं यसलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अहिले सम्म तपाईंसँग केहि फरकहरू छन् भने, यो इमान्दार छलफलको साथ उनीहरूलाई समाधान गर्ने अवसर हो।
व्यवसाय: मोलतोल गर्नका लागि यो राम्रो दिन हो, विशेष गरी यदि तिनीहरूले केहि मनोरन्जन वा महिलाले प्रयोग गर्ने सम्बन्धित उत्पादनहरू समावेश गर्दछ। ... अधिक
अतिशयोक्ति र बेकारको प्रवृत्ति। उपभोक्तावादको क्रोधले तपाईंलाई पैसा खर्च गर्न र त्यसपछि अफसोसको लागि अग्रसर गर्दछ, जबकि तपाईंको राहतको आवश्यकताले तपाईंलाई चरम सीमामा पुर्‍याउन सक्छ।
प्रेम: तपाई सतर्क हुनुहोस्, किनकि जब तपाईसँग नयाँ सम्बन्ध सिर्जना गर्ने अवसर हुन्छ, तपाई बाह्य विशेषताहरुमा अडिनुहुनेछ जुन तपाईलाई त्यतिबेला तपाईले भेट्नुहुने छैन। ... अधिक
तपाईं आज अरूलाई र विशेष गरी तपाईंको परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो कोमलता देखाउन सक्नुहुन्छ। आज यसले तपाइँलाई सामाजिकता प्रदान गर्दछ र तपाइँको कामुकतालाई जगाउँदछ। तपाईं व्यर्थ र अत्यधिक खपत हुनेछ।
प्रेम: तपाईं आज एक बलियो कामुक मुड हुनेछ। तपाईं सबै संग राम्रो हुनेछ विशेष गरी तपाईंको साथीको साथ। तपाईंको बन्धन धेरै मद्दत गर्दछ। यस दिनले नयाँ सम्बन्धको सुरूवात गर्न सक्दछ, यदि तपाईंसँग पहिल्यै नै छैन भने। ... अधिक
काममा वरिष्ठबाट इनाम दिनुहोस् र शक्तिमा वा बुढेसकालका मानिसहरूबाट मद्दत लिनुहोस्, यो दिन ल्याउँछ। तपाईंसँग तपाईंको सन्तुलन कायम राख्ने एउटा तरिका छ। सामाजिक प्रतिष्ठा र चमक। सहकार्यको लागि राम्रो दिन हो, किनकि तिनीहरू स्थिरता र आपसी सहुलियतहरूको लागि स्वभावमा आधारित छन्।
प्रेम: छलफल गर्न र सम्बन्धमा तपाईंको आपसी भावनाहरू र आकांक्षाहरूको पुष्टि गर्न राम्रो दिन हो।
प्रोफेशनल: तपाईलाई आज धेरै व्यावहारिक लाग्नेछ र तपाई धेरै प्रोफेशनल मुद्दाहरु ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, जुन तपाईले पछि बुझ्नुहुनेछ कि त्यसले तपाईलाई कति फाइदा उठायो। सौन्दर्य सम्बन्धित व्यावसायिक मुद्दाहरू विशेष गरी मनपर्दछ। ... अधिक
जब तपाईं बुझ्ने, प्रेम र कोमलता को आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई आनन्द लिन गाह्रो लाग्नुहुन्छ किनभने बाह्य कारकहरूले तपाईंलाई दबाब दिन्छन्। सामना गर्न तपाई घुमाउन र रमाईलोको साथ अनुहार हटाउन सक्नुहुन्छ।
स्वास्थ्य: आज आफैलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ, तर भ्रमबाट बच्नुहोस्। वजन र अपच प्राप्त गर्न सजिलो।
प्रेम: आज तपाईंको मिलनसारता एकदमै बलियो छ र तपाईं आफ्ना साथीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्नुहुनेछ, वास्तवमा तपाईंको प्रेमी वा मालकिनका साथ। तपाइँ आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने तरिका र तपाइँ रमाईलो भएकोमा थोरै बढाइचढाइ गरिएको छ।
व्यवसायिक: आराम र शान्तिको दिन। जे होस्, यदि तपाईंले काम गर्नुपर्‍यो भने, तपाईंले अरूहरूसँगको सम्बन्धमा समस्याहरू सामना गर्नुपर्दैन, तर वार्ता वा महत्वपूर्ण सम्झौताहरू स्थगित गर्नु राम्रो हुन्छ किनभने तनाव र द्वन्द्वबाट बच्न तपाईंले धेरै सजीलो सम्झौता गर्नुहुनेछ। ... अधिक
आन्तरिक शान्ति जुन आज विकिरण गरिएको छ, त्यस्तो शक्ति हो जुन अरूलाई म्याग्नेटिज गर्दछ र प्रेम र स्नेह दिन उनीहरूलाई विश्वस्त बनाउँछ।
प्रेम: प्रेमको भावनाहरू यस ग्रह प्रभावको समयमा विशेष गरी बलियो हुन्छन्। तपाई अत्यन्त भावनात्मक रुपमा सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईको मुड राम्रो छ र तपाईको मानसिक सन्तुलन चल्दैछ र तपाईलाई धेरै मनमोहक बनाउँदछ।
व्यवसाय: टीमहरूसँग सम्पर्कमा रहनको लागि शुभ दिन हो। ... अधिक
तपाईंको कामुकता र आकर्षण आज माथि बढाइएको छ। तपाईले इच्छुक व्यक्तिबाट तपाईका इच्छाहरू आराम र खुशीले तृप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रेम: आज यौन गतिविधि तीव्र छ र यदि तपाईं यौन सम्बन्धमा संलग्न हुनुहुन्न भने तपाईं हुन चाहानुहुन्छ। तपाईंसँग ठूलो सफलताको साथ प्रेम खोजी गर्ने क्षमता छ। ... अधिक
सद्भाव मिल्छ! प्रेमले भेट्छ प्रेम! कोमलता कोमलता पूरा! बुझ्ने समझ बुझ्छ! एउटा धेरै सुन्दर दिन जसले तपाईंलाई भावनात्मक सुरक्षा र सबैलाई म्याग्नेटाइज गर्ने शक्ति दिन्छ!
प्रेम: आज तपाईंको सम्बन्धमा पहल गर्नुहोस् र परिणामबाट तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। कसैलाई आफ्नो भावनाको लागि अन्धकारमा नराख्नुहोस् र तपाइँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ देखाउनुहोस्। सम्बन्ध मा छैनन् जो को लागी, तिनीहरूले एक शुरू को एक राम्रो मौका हुनेछ।
व्यवसायिक: यदि तपाईले अरुको सहयोग आवश्यक छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, यो खोजी गर्ने दिन हो। ... अधिक
व्यवसायिक: गम्भीर व्यवसायका मामिलाहरू सम्हाल्न राम्रो दिन हो, किनकि तपाईं उद्देश्यपूर्ण, रूढीवादी र निष्पक्ष हुनुहुन्छ। आज तपाईं आफ्ना भावनाहरूमाथि शाब्दिक हुनुहुन्न तर तपाईंको तर्कबाट। ... अधिक
सुखद सामाजिक जीवन र रमाईलो परिचितहरू। आज पुष्टिकरणहरू ल्याउँदछ र मानसिक उत्साह सिर्जना गर्दछ। आज सम्भावना छ कि विपरीत लि interest्गको व्यक्तिले तपाईंलाई देखाउने विशेष रूचि।
प्रेम: रमाईलो गर्नुहोस्! तपाईं विशेष गरी आज माया महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईको जीवन अनन्त पार्टी हो र दुईको लागि पार्टी पनि हो। तपाईको खुसी मुड र अक्षय आकर्षण जुन तपाई रेडिएट गर्नुहुन्छ तपाईलाई अपूरणीय बनाउनुहुनेछ।
व्यवसायिक: तपाईले पहिले भन्दा पनि टीम वर्कको आनन्द लिनुहुनेछ। यदि तपाई कसैलाई राम्रो प्रभाव पार्न चाहानुहुन्छ, यो दिन उनीहरूलाई भेट्न राम्रो दिन हो। ... अधिक
समझको कमी र भावनात्मक भ्रम मुख्य कारणहरू हुन् जसले सामाजिक समस्याहरूमा गलत कार्यहरू निम्त्याउँछन्, तर पारिवारिक समस्याहरूको दुरुपयोगमा पनि। दिनमा बेलगाम फोहोर र उपभोक्तावादको लागि उन्मादको प्रवृत्ति छ।
स्वास्थ्य: दिनले सानो समस्याहरूको सामना गर्ने गर्दछ, जसले तपाईंलाई चिन्ता गर्न र तपाईंको दिन बिगार्न सक्छ।
प्रेम: आज तपाईं धेरै कामुक हुनुहुनेछ। तर याद गर्नुहोस् तपाईंको पार्टनरलाई अलि अलि छोड्नुहोस् ताकि ऊ उही मुडमा जान सक्छ। यसलाई दमन नगर्नुहोस्। तपाईंको आकर्षण प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको साथमा रमाईलो गर्न उहाँलाई लोभ्याउन। ... अधिक
प्रेम: आज यौन गतिविधि तीव्र छ र यदि तपाईं यौन सम्बन्धमा शामिल हुनुहुन्न भने तपाईं हुन चाहानुहुन्छ। तपाईंसँग ठूलो सफलताको साथ प्रेम खोजी गर्ने क्षमता छ। ... अधिक
दैनिक पूर्वानुमान - ट्रान्जिटहरू, नक्शा, अनुहार, ग्रहहरू, घरहरू, राशि चिह्न र अधिक
जन्मदिन राशिफल सित्तैमा
नक्शा, अनुहार, ग्रहहरू, घरहरू, राशि चिह्न र अधिक
शहर वा गाउँ
शहर वा गाउँ लेख्नुहोस् (र स्वर यदि तपाईं या त लोवरकेस वा अपरकेसमा ग्रीक लेख्नुहुन्छ भने) र केही सेकेन्ड पछि बक्समा देखा पर्नुहोस् जुन तपाईंले टाइप गर्न रोक्दा खोल्नेछ। यदि कुनै शहर वा गाउँ देखा पर्दैन, अंग्रेजी वर्णहरूमा टाइप गर्नुहोस्, र / वा माथिको बक्समा देश चयन गर्नुहोस्। तपाईं शहरको पहिलो अक्षर मात्र लेख्न सक्नुहुनेछ र परिणामहरू छानिनको लागि पर्खनुहोस्।
यदि तपाईंले देश छनौट गर्नुभएन र तपाईं सम्पूर्ण विश्व प्रयोग गर्नुभयो भने नतीजाहरूलाई न्यूनतम बनाउन तपाईंले देश पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी मात्र अमेरिका टाइप गर्नुहोस् र संयुक्त राज्य अमेरिका होईन। उदाहरण को लागी यदि तपाईको शहर सैन फ्रांसिस्को हो, टाइप गर्नुहोस्
सूर्य फ्रान्सिस्को हामीलाई
यदि शहर वाशिंगटन हो किनकि त्यहाँ धेरै वाशिंगटन छन् तपाईले राज्यको उदाहरण पनि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। वाशिंगटन हामीलाई क्यालिफोर्निया
तर यदि तपाईले यस भन्दा पहिले देश छान्नु भएको छ र तपाईले संयुक्त राज्य अमेरिका प्रयोग गर्नुहुन्छ उदाहरणका लागि केवल शहर / शहर / गाउँ टाइप गर्नुहोस् र देश होइन।
यदि तपाईले आफ्नो शहर पत्ता लगाउन कोशिस गर्नुभयो र स्क्रिप्टले काम गरे जस्तो देखिदैन, उदाहरणको लागि तपाईले टाइप गर्नु भएको बारको दायाँपट्टि सानो घुमाउने पा see्गो देख्न सक्नुहुन्न, केवल शहरलाई टाइप गर्नुहोस् वा पछाडि स्पेस गर्नुहोस्। अन्तिम अक्षर र यसलाई पुनः टाइप गर्नुहोस्।
गोपनीयता नीति लाइसेन्स सम्झौता सहायता बारेमा